Yakaburitsa vhezheni itsva yeOpen Build Service 2.10, chikuva chekusimudzira kwekugovera uye software | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura kuvhurwa kweiyo Open Open Service 2.10 chikuva chakaziviswa, iyo yakagadzirirwa kuronga iyo software chigadzirwa uye yekuparadzira nzira yekuvandudza, kusanganisira kugadzirira uye kuchengetedza zvinoburitswa uye kugadzirisa. Iyo system inomira kunze kwekutendera mapakeji kuve akayambuka yezvakawanda zvakakura zvekuparadzirwa kweLinux kana gadzira yako yega yekuparadzira zvichibva pane imwe pasuru.
Kuumbwa inotsigira 21 mapuratifomu (kugovera), kusanganisira CentOS, Debian, Fedora, OpenMandriva, openSUSE, SUSE Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), uye Ubuntu. Gungano rinogona kuitirwa zvivakwa zvitanhatu, zvinosanganisira i6, x386_86, uye ARM.
OBS inovhara pamusoro pemakumi mapfumbamwe nemazana mapakeji uye inoshandiswa senzira huru yekuvaka openSUSE, Tizen, Sailfish / Mer, NextCloud, uye VideoLAN mapurojekiti, pamwe nekuvaka zvigadzirwa zveLinux paDell, Cray, uye Intel.
Kugadzira iyo nyowani vhezheni yechirongwa chakapihwa muchimiro chebhajari pasuru yeanoda system, zvakakwana kugadzira faira rekutsanangudza kana kubatanidza pasuru repositori yakaratidzwa pane software.opensuse.org saiti.
Pamusoro pezvo, nharaunda yakagadzirira-kugadziridzwa inogona kugadzirirwa kumhanyisa pamasisitimu ehurongwa, enzvimbo dzakagadzika-gore, kana kurodha pasi sekugovera chaiko.
1 Nezve Open Open Sevhisi
1.1 Main nyowani maficha eO Open Vaka Sevhisi 2.10
Nezve Open Open Sevhisi
Paunenge uchishanda neOBS, mugadziri anogona kushandisa iyo online sevhisi build.opensuse.org kana kuisa sisitimu yakafanana pane yako server
Mukuwedzera, iwe unogona kukurumidza kuendesa yako wega zvivakwa nerubatsiro rweyakanyanya yakagadzirirwa mifananidzo yemamishini chaiwo, makontena, kuisirwa kwenzvimbo kana kwePXE kubhururuka pamusoro penetiweki.
Izvo zvinokwanisika kushandura kurodha pasi kwesosi zvinyorwa kubva kune zvinyorwa kana mafaira ekunze Git kana Subversion ine ftp kodhi uye yekutanga purojekiti webhu sevha, ichikubvumidza iwe kuti ubvise iyo yepakati bhuku kurodha pasi yekodhi mafaera kune yemuno yekugadzira muchina uye wozoapinza iwo mune yakavhurikaSUSE Vaka Sevhisi.
Iwo epakeji mapakeji anopihwa nematurusi ekuona kutsamira kwemamwe mapakeji ne otomatiki kugadzirisazve kweanovimba kana shanduko dzaitwa kwavari. Nekuwedzera zvigamba, zvinokwanisika kuvaedza nemapakeji akafanana kubva kune mamwe mapurojekiti
Kuti utore Open Open Service, unogona kushandisa ese maturusis command tambo uye webhu interface.
Kune zvishandiso zvekubatanidza vechitatu-bato vatengi uye kushandisa zviwanikwa kubva kune vekunze masevhisi senge GitHub, SourceForge, uye kde-apps.org.
Vagadziri vane mukana wezvishandiso zvekugadzira mapoka uye kuronga kubatana. Iyo kodhi yezvinhu zvese zvehurongwa, kusanganisira iyo webhu interface, iyo bvunzo package system uye izvo zvikamu zveiyo yapfuura vhezheni, yakavhurika pasi peGPLv2 rezinesi.
Main nyowani maficha eO Open Vaka Sevhisi 2.10
Mune iyi vhezheni itsva iyo webhu interface yakashandiswazve zvizere ine furemu zvinhu Bootstrap, iyo yakarerutsa kodhi yekugadzirisa, yakabatanidza iyo yakawanda-chikamu dhizaini, uye ikabvisa matambudziko mazhinji (akamboshandiswa 960 Grid System, dingindira rayo reJquery UI, uye yakawanda yakatarwa CSS).
Kunyangwe iko kugadzirisa, ivo vagadziri vakaedza kuchengetedza kuzivikanwa kwezvinhu uye nenzira yakajairika yekushanda kudzikisira kusagadzikana panguva yekuchinjira kuchikamu chitsva;
Basa rakaitwa rekuvandudza rutsigiro rwekunyorera kunyorera uye kutumirwa yemidziyo yakadzivirirwa.
Ma module akawedzerwa kubatanidzwa neGitlab uye Pagure, izvo zvinokutendera iwe kubatanidza zvimwe zviito muOBS paunenge uchiita zvipikirwa zvitsva kana kana zvimwe zviitiko zvikaitika mune aya masisitimu.
Yakabatanidzwa kurodha pasi kuAmazon EC2 uye Microsoft Azure gore nharaunda, pamwe nekune Vagrant.
Kodhi yekuita yakagadziridzwa kugadzirwa kwechigadzirwa uye kuburitswa mune yekuchengetera. Iyo yekuvandudza ine mukana wekuwedzera kuwedzera chirongwa.
Yezvimwe zvitsva zvinowanikwa pachena tinowana:
Sysv yekutanga zvinyorwa zvinotsiviwa nema systemd mafaera
Wakawedzera rutsigiro rwekuchengetedza metric ine data rekuita mu InfluxDB
Iko kushandiswa kwe emoji kunotenderwa mumavara mameseji (kuiswa mune dhatabhesi.yml, iko kukodha kunofanira kusetwa ku utf8mb4)
Wakawedzera sarudzo yekutumira zviziviso kuvaridzi vemeseji nezvematambudziko, neruzivo nezve zvitsva zvataurwa
Chekutanga simbiso yezvikumbiro ficha yakaonekwa (chikumbiro chinogamuchirwa chete mushure mekunge ongororo yapera)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Yakaburitsa vhezheni itsva yeOpen Build Service 2.10, chikuva chekusimudzira kwekugovera uye software
Iyo nyowani Raspberry Pi 4 ine matambudziko neiyo USB-C, sezvo isingatsigire chero tambo